Distrikan’Ambanja: vehivavy matihanina ny 95 %-n’ny mpanao asa tanana | NewsMada
Distrikan’Ambanja: vehivavy matihanina ny 95 %-n’ny mpanao asa tanana
Manana ny toerany ny fikambanan’ny mpanao asa tanana any amin’ny distrikan’Ambanja, mivondrona ao anatin’ny Chambre des métiers et artisanats. Vehivavy matihanina ny 95 % amin’ireo mpikambana : mpanjaitra, mpandrary, mpanao sary sokitra, mpanefy, mpamboly hazo fihinamboa… Efa nandray anjara tamin’ny tsenabem-paritra sy tsenabe iraisam-pirenena izy ireo, toy ny natao tany Mayotte, ny taona 2017. Tamin’ny fifampiarahaban’izy ireo tojo ny taona 2019, niarahana nanaovana tombana ny ezaka vita sy ny mbola hatao hanatsarana izany.
Tapaka tamin’io fotoana io ny hitadiavana tsena eto an-toerana, sy any ivelany hiarahana amin’ny mpiara-miombon’antoka malagasy na vahiny. Mandritra ny fivoriambe hatao any Nosy Be, ny volana marsa ho avy izao, ny handrefesana ny ezaka ataon’ny mpikambana tsirairay. Nosafidina hanaovana izany fivoriana izany ny any Nosy Be noho ny fahamaroan’ny mpizahatany ao amin’io tanàna io sy hifampiraharahana amin’ireo mpisehatra fizahantany.
Anisan’ny mahaliana ireo vahiny mpizahatany ny asa tanana malagasy, manana ny mampiavaka azy sy manambara ny kolontsaina malagasy. Azo lazaina fa mahafehy izany ireo vehivavy any amin’ny faritra Diana ireto fa mbola nanamafy koa ny Chambre des métiers et artisanats ny hanomezana fiofanana azy ireo. Fito taona izao io fikambanana io, najoro ny taona 2012. Tsy misy misakana any amin’ny faritra hafa ny hanao toy izao.